IOS 11 waxay la imaaneysaa Siri cusub oo wata warar iyo cod kale | Wararka IPhone
Siri wey bislaataa oo codkeeda ayey ku bedeshaa macruufka 11
Siri wuxuu ka mid ahaa qaybaha ugu waaweyn ee waxaan rabnay inaan ku aragno horumarin iOS 11, Hagaag, marwalba waxaa la sheegaa in kaaliyaha macmalka ah ee Apple uu ka hooseeyay tartanka, xitaa in ka sii badan iyadoo ay ka go'an tahay dhowaan Google iyo Amazon arimahan. Ma jiraa wax war ah? Waxaa jira.
Marka hore, Siri codkiisii ​​waa is beddelay. Isku day inaad sameyso kaaliyaha dalwadduhu inuu ka dhawaajiyo 'dad badan', khilaaf yar oo u dhexeeya mashiinka iyo xaqiiqda, Waa mid ka mid ah astaamaha ugu waa weyn ee la isku dayay sanadba sanadka ka dambeeya. Siri-ka cusubi wuu ka jilicsan yahay markuu hadlayo wuxuuna sahlayaa in isdhexgalka maalin kasta la socdaa ay ka xor tahay wax astaamo ah oo ka caadi ah kombuyuutarka marka loo eego kaaliyaha shakhsi ahaaneed.
Waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan Siri ee cusbooneysiintan cusub, iyo inaan hubaal arki doonno ballaarinno wajiga dhacdada Sebtember, ayaa ah tan ugu weyn dhexgalka nidaamka oo dhan si looga jawaabo ficilada badan. In kasta oo ayan wax badan ka gelin arrinta, waxay si maldahan u sheegeen inay jiraan waxyaabo badan oo soo socda oo awood u leh inay Siri ka dhigaan qalab dhab ah oo ay u adeegsadaan maalinba maalinta ka dambaysa iyada oo aan wax heshiis ah laga gaadhin. Waxay ahayd waqti.
Intaa waxaa sii dheer, mid ka mid ah astaamaha ugu xiisaha badan ee lagu dari doono saaxirka hadda waa awooda lagu sameeyo tarjumaado isku mar ah, wax muhiim u ah adduun weynaha sii kordhaya. Tarjumaadahaan waxaa laga heli doonaa barta Ingiriisiga, Isbaanishka, Faransiiska iyo Shiinaha mawjadda koowaad, inkasta oo ay wakhti uun ka tahay inta ay sii waddo ballaadhinteeda luqado badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 11 » Siri wey bislaataa oo codkeeda ayey ku bedeshaa macruufka 11
Apple Music hadda waa ka bulsho badan tahay sidii hore
IOS 11 ayaa soo ifbaxaysa: Fariimaha iyo Apple Pay